Shirkadaha SaaS Excel ee Guusha Macaamiisha. Adiguna Waad Adiguna ... Oo Waa Sidee | Martech Zone
Shirkadaha SaaS Excel ee Guusha Macaamiisha. Waad Adiguna… Oo Waa Sidee
Software -ku ma aha iibsi uun; waa xiriir. Markay sii kordhayso oo ay cusboonaysiineyso si loo daboolo baahiyaha teknolojiyadda cusub, xiriirku wuxuu ku koraa inta u dhexeysa bixiyeyaasha softiweerka iyo adeegsadaha ugu dambeeya-macaamilka-iyadoo wareegga iibsiga joogtada ah uu sii socdo. Software-ka-adeegga (SaaS) bixiyeyaashu waxay inta badan ku fiicnaadaan adeegga macmiilka si ay u noolaadaan sababtoo ah waxay ku hawlan yihiin wareeg gadasho joogto ah siyaabo ka badan hal.
Adeegga macmiilka ee wanaagsan wuxuu gacan ka geystaa xaqiijinta qanacsanaanta macaamilka, wuxuu kobciyaa kobcinta warbaahinta bulshada iyo gudbinta ereyga-afka, wuxuuna siiyaa adeegsadayaasha kalsooni ay ku ballaariyaan xiriirkooda iyagoo adeegsanaya adeegyo iyo karti dheeraad ah. Bixiyeyaasha SaaS ee ku hawlan qaybta B2B, tani waxay macnaheedu noqon kartaa tirooyin aad u badan oo kuraas iyo liisanno lagu daray, dhammaantoodna ka yimid hal macmiil.
Dhaqaalaha adeegga tartan ee maanta, taageerada macmiilka ee gaarka ahi waxay noqon kartaa kala -sooca summadaha ugu muhiimsan dhammaan. Iyadoo taas maskaxda lagu hayo, halkan waxaa ah dhowr talooyin oo qiimo leh oo ka socda goobta SaaS:
1. Ha u oggolaan wanaagga (keydinta kharashka) inuu noqdo cadowga kaamilka ah (qancinta macmiilka).
Hoos -u -dhigidda kharashaadka waa hubaal yool mudan. Si xad dhaaf ah loo qaatay, si kastaba ha noqotee, waxay u horseedi kartaa go'aanno ganacsi oo xun.
Hawlgallo badan oo adeeg macmiil ayaa isku dayay inay maareeyaan kharashaadka iyagoo ka leexinaya taageeradooda macmiilka, iyadoo ay hoos u dhacday waayo -aragnimadii macmiilka. Kuwo kale ayaa soo saaray ikhtiyaarro is-adeegsi oo dheeri ah, taas oo noqon karta eray-bixin loogu talagalay "akhri maqaalkan oo naftaada u garwaaqso," laakiin bixiyeyaasha SaaS waa khubaro fahamsan in hal cabbir uusan ku habboonayn. Millenniyadii tiknoolajiyadda u fiicnaa iyo Gen Zers ayaa laga yaabaa inay ku fiicnaadaan ikhtiyaarka is-adeegsiga onlaynka ah, laakiin Gen X iyo macaamiisha boomer ee jecel inay adeegsadaan taleefan waxay u tixgeliyaan is-adeegsiga inay tahay hab sahlan oo lagu baabi'in karo is-dhexgalka aadanaha ee tooska ah.
Hay'adaha taageera ee isku daya inay dib-u-qiimeeyaan caqabadda adeegga-kharashka iyagoo xaddidaya muddada xiriirka ayaa iyaguna seegi kara qodobka. Adigoo dhiirigelinaya wakiilada si loo yareeyo waqtiga ku baxa wicitaan kasta, sheekaysiga, farriinta, ama emaylka, way fududahay in si qaldan loo fahmo ama la iska indho tiro baahiyaha macmiilka. Khibradaha liita badanaa waa natiijada.
Waxaa muhiim ah in la qaddariyo muhiimada kulannada tayada leh daacadnimada macmiilka muddada-dheer, gaar ahaan marka la joogo wareegga wax-iibsiga ee joogtada ah. Ilaa ay shirkaduhu wax ka qabtaan qiimaha hoos u dhaca, luminta kalsoonida, iyo dhaawaca sumcadda sumadda, keydinta kharashka muddada-gaaban waxay sii wadi doontaa inay ka guuleysato guusha muddada-dheer.
2. Mudnaan sii labadan mitir halkii.
Adeegga macmiilka ee wanaagsan iyo ururada taageerada ayaa diiradda saara dhowr cabbir: inta badan:
Xawaaraha celceliska jawaabta - mitir (wax u eg xawaaraha celceliska si looga jawaabo, ama SIDA), kaas oo lagu cabbiri karo madal taageero kasta oo casri ah; midna wuxuu diiradda saaray qanacsanaanta macaamilka, iyadoo cabbirro lagu soo ururiyey sahanno degdeg ah oo xiriirka kadib ah. Waqtiyada jawaab -celintu waa barometer -ka ku habboonaanta, helitaanka iyo qanacsanaanta, sidaa darteed jawaabaha waa inay ahaadaan kuwa ugu dhaqsaha badan.
Dhibcaha qanacsanaanta macaamilka - oo ay la socdaan faallooyinka qaab -dhismeedka xorta ah, muuji in baahida macmiilka ee tayada adeegga guud (QoS) la kulmay. Halkii lagu xukumi lahaa waxtarka iyadoo la adeegsanayo cabbiraadaha sida qaraarada taabashada koowaad iyo muddada wicitaanka - taas oo si fudud loo maareyn karo aakhirkana ma go'aamin QoS — Bixiyeyaasha SaaS waxay ku guuleystaan ​​cabbirka ASA iyo qanacsanaanta guud.
3. Ka fikir macaamilka sidii inay tahay hooyadaa oo telefoon ku jirta.
Naxariistu waa qayb weyn oo ka mid ah taageerada macmiilka. Bal qiyaas inay tahay hooyadaa ama xubin qoyskaaga ah oo taleefoon ah; waxaad rabtaa in xarunta taageerada ay si degdeg ah uga jawaabto (ama iyada sii ikhtiyaarka ay dib kuugu soo wacdo). Waxaad kaloo rabi lahayd wakiilku inuu dul maro talaabo kasta oo xalka ah dulqaad iyo naxariis, xitaa hadday taasi la macno tahay inuu kula hadlo iyada oo loo marayo xiriir is-adeegsi. Ugu dambayntii, waxaad rabtaa in wakiilku siiyo waqtiga ay u baahan tahay oo dhan, xitaa haddii ay taasi wicitaanku ka gudubto bartilmaameedkii muddada dheeraadka ahaa.
Weydii maamulaha adeegga macmiilka shirkad kasta oo SaaS ah waxayna ku heshiin doonaan in tababarka xirfadaha softiweerka ee shaqaalaha taageerada macmiilku uusan ahayn wax wanaagsan in la helo; halkii, waa lama huraan. Xitaa haddii tababarka wakiilka shirkaddu uu wanaagsan yahay oo dhibcaha ASA ay ka sarreeyaan celcelis ahaan, ula macaamilka macmiil kasta sida xubin qoyska ka mid ah ayaa ka dhigi doonta dadka isticmaala inay sumcaddaada ka sarreeyaan dhammaan qodobbada kale.
4. Ku dallacsii wakiiladaada waaxyo kale
Hoos -u -dhaca gudaha waa inuu ahaadaa cabbiraadda ugu muujinta badan ee guusha taageerada macmiilka. Haddii shirkad kor u qaaddo wakiiladeeda adeegga macaamiisha ugu wax-qabadka wanaagsan qaybaha kale ee ururka, waxay ka dhigan tahay in tababarku uusan ahayn mid wanaagsan oo keliya laakiin sidoo kale uu shaqaalahaas siinayo waddo xirfadeed.
Waaxaha adeegga macmiilka ee caqliga leh kama baqayaan inay wakiilladooda u sii gudbaan iibka, hubinta tayada, horumarinta wax soo saarka, ama farsamooyin kale. Waxaa loola jeedaa wakiilladaasi waxay barteen astaanta iyo sidoo kale xooggeeda iyo fursadaha kobcinta ka -qaadista safkooda hore. Iyagoo ka qalin jabiyay “nidaamka beeraha” ee shirkadda, waxay leeyihiin aragtiyo iyo caadooyin aad u qiimo badan oo lagu qiimeyn doono ganacsiga oo dhan.
Dib -u -fiirinta waxa muhiimka ah si loo wado guusha (macmiilka)
Ganacsatadu waxay jecel yihiin inay dhahaan, "Waxa la cabbiro ayaa la maamulaa." Adeegga macmiilka, si kastaba ha ahaatee, waxa la qiyaaso inta badan waa la helaa la marsiiyo. Bixiyeyaasha SaaS waxay ku fiican yihiin inay ka fogaadaan cilladaha cabbirka maxaa yeelay waxay garwaaqsadeen in dhaqanku adeegga ka fogeeyo macaamiisha halkii loo aadin lahaa.
Waa adduun aan la soo koobi karin oo halkaas ka jira, oo macaamiishu waxay khibradaha ku qiimeeyaan wax kasta oo kale. Sida wanaagsan ee shirkaddu ula dhaqanto macaamiisheeda ayaa ugu yaraan muhiim u ah badeecada ay iibinayso. Bixiyeyaasha softiweerka ayaa laga yaabaa inay iibiyaan kan ugu horreeya S in SaaS, laakiin si ay u guulaystaan ​​waa inay noqdaan sayid labaad S. Taasi waa fikrad shirkad kasta - iyo macmiil kasta - runtii way qaddarin doonaan.
Tags: sidaxawaaraha celceliska si looga jawaabocelceliska xawaaraha jawaabtab2bsumcad sumadeeddaacadnimada macaamiishahaynta macaamiishaAdeegga macaamiishahawlaha adeegga macaamiishaguul macaamilkaxallinta taabashada koowaadmacmiilka muddada dheertayada adeeggasaasServicesoftwaresoftware adeeg ahaan
Andy Mickelson waa madaxweyne ku xigeenka taageerada macmiilka Vertafore, oo ah bixiye tiknoolajiyad caymis oo hormuud ah. Kaalintiisa dhexdeeda, waa VP-ku-saleysan macaamiisha oo leh khibrad ku aaddan dhisidda go'aanno la qiyaasi karo, kooxo wax-qabad sare leh, iyo hab-dhaqanka ugu wanaagsan ee macmiilku wajahayo.
Canva: Kickstart iyo Wada Shaqeynta Mashruuca Naqshadeyntaada Soo socota